Jesse Lingard oo wali doonaya inuu ka tago Manchester United bisha Janaayo. | laacibfm.com
Home Laacib Jesse Lingard oo wali doonaya inuu ka tago Manchester United bisha Janaayo.
Jesse Lingard oo wali doonaya inuu ka tago Manchester United bisha Janaayo.
Manchester United weeraryahankeeda Jesse Lingard ayaa lagu soo waramayaa in weli uu doonayo ka tagitaanka Old Trafford inta lagu guda jiro bisha Janaayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, inkastoo uu baxay Ole Gunnar Solskjaer .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa ku dhibtooday inuu si joogta ah u ciyaaro xilli ciyaareedkan, iyadoo Solskjaer uu soo xushay ciyaartoy dhowr ah oo ka horeeya 28 jirka.
Lingard ayaa lala xiriirinayay inuu ku laabanayo West Ham United bisha Janaayo, isagoo ku riyaaqay amaah uu ku qaatay kooxda qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu dhawaan ka dhawaajiyay inuu u dhaqaaqi karo garoonka London Stadium.
Ciyaartoyda sida Donny van de Beek iyo Anthony Martial ayaa labadoodaba la sheegay inay diyaar u yihiin inay sugaan ka hor inta aysan go’aan ka gaarin mustaqbalkooda, iyadoo labadoodaba lagu magacaabay Man United XI habeenkii talaadada ee ee kulankii Villarreal.
Si kastaba ha ahaatee, Lingard looma isticmaalin kulankii Champions League, sida laga soo xigtay Daily Mail , weeraryahanka ayaa weli quus ka taagan inuu baxo inkastoo Solskjaer uu ka tagay.
Qandaraaska Lingard ee Old Trafford ayaa ku eg bisha June ee soo socota, Red Devils ayaana lagu xamanayaa inay diyaar u tahay inay ku iibiso 10 milyan ginni inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Previous articleDaafaca Chelsea Ben Chilwell oo u badan tahay inuu seego inta ka dhiman xilli ciyaareedka
Next articleWararka Suuqa Caawa: Kuwa ugu Danbeeyay Thiago Silva, Dusan Vlahovic, Attila Szalai, Ernesto Valverde, iyo Dembele
AC Milan ayaa lagu soo waramayaa in si adag tartanka ugu jirto saxiixa xidiga Arsenal ee Alexandre Lacazette . 30 jirkaan qandaraaskiisa Emirates Stadium...
Liiska: Xidigaha ku guuleestay 10 Kaalmood Abaalmarinta Ballon d’Or Oo Oo...
Kylian Mbappe oo ku dhow inuu u dhaqaaqo Kooxda Real Madrid,...
Horudhac: Roma Vs Torino ee Horyaalka Serie A Italy Wararka Labada...